कोमल गीतका तरेलीहरू – मझेरी डट कम
कोमल गीतका तरेलीहरू
कोमल र हार्दिक मनको सुललीत अभिव्यक्ति हो गीत । मन छुने गीत गुन्गुनाउँदा बोझिलो मन पनि सजिलोको अनुभूत गर्छ । भोजपुर, दोभाने-४ सालेवामा जन्मेका बिमल गिरी चारपाने झापा हुँदै सीमा काटेर हुत्तिए । भारत, बङ्गलादेश, कतार, दुबही, साउदी अरेविया, बहराइन, थाइल्यान्ड, जर्मनी, लग्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड, फ्रान्स हुँदै अहिले उनका पाइला रोकिएका छन् बेल्जियममा ।
सानैदेखि भोजपुरका उकाली, ओर्‍हाली र झापाको समथरमा पनि सुसेलीमै सुसेले मनका बहहरू विमलले । “मनको बह, कसैसँग नकह” भने पनि कवि मनका विमल गिरी पोखिए “सम्झनाका तरेलीहरू” गीतिसङ्ग्रहमा । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजबाट प्रकाशित प्रस्तुत गीतसङ्ग्रहमा गीतकार गिरीका पाँच दर्जन गीतहरू समाविष्ट छन् । यस सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहीत केही गीतहरू गिरीकै “उपासना” गीति एल्बममा समेत गुञ्जिएका छन् विभिन्न कलाकारको गलामा । हो, गीत गेयात्मक विधा हो, गीत गाइएन भने, गीतकार, सङ्गीतकार र गायक गणेश रसिकले भनेझैं हुन्छ- गाए गीत, नगाए कविता । यस अर्थमा बिमलका गीतहरूमा कविता पनि उत्तिकै घुलेको छ । गीतको प्राण भन्नु सङ्गीत र स्वर हो । सम्झनाका तरेलीका गीतहरू गेयात्मक छन् । सम्झनाका तरेलीहरूमा गीतकार गिरीले आफन्ती र पराई मनसँग पनि हार्दिक परेली अर्थात् पर्म लाएका छन् । “परेली” नेपाली श्रम माटोमा लछप्पै भिजेको प्रिय शब्द हो । मनदेखि मनसम्म गीतकार पुगेका छन्- यसरी नै परेली लाएर । गिरीका गीतमा आफ्नै रस्ती/बस्ती र जिन्दगीका गस्तीहरू भेटिन्छन् । संयोग/ वियोग गिरीका गीतका मुख्य भावभूमि हुन् ।
अस्तव्यस्त रहरहरू, ओइलाई गए घामसँगै
अस्ताई गए खुसीहरू, अँधेरीका यामसँगै
अँध्यारोको अभीष्ट पाटो भनेको उज्यालो हो, अँध्यारो हुन्छ र त उज्यालोको चाहना हुन्छ र त्यै उज्यालोको खोजीमा छन् गीतकार ।
आफ्नो सीमा काटेर सात समुन्द्रपारि पुग्नु गीतकारको रहरभन्दा पनि वाध्यता र विवशता हो पक्कै पनि । यद्यपि उनी घरदेशको छट्पटीमा गुन्गुनाउँछन् यसरी –
साँझ बिहान आमा भन्दै, तिम्रै गाथा गाइरहूँ
बादल पारि रहे पनि, नेपाल भन्न पाइरहूँ !
आखिर मन त नेपाली नै हो नि, जहाँ पुगे पनि । परदेशमा हुँदा घरदेशको सम्झनाले आहात हुने थुप्रै कलमहरू छन् । त्यस्तै कलममध्येका टपक्क टिपेर खल्तीमा सजाउने कलम हुन्- गीतकार विमल गिरी ।
गीतको भावभूमि मूलतः प्रणय/प्रेम मात्रै पनि होइन । गीतले समेट्ने पाटा र बाटाहरू फरक फरक छन् । प्रस्तुत सङ्ग्रहमा स्रष्टा-द्रष्टाहरू जगदीश घिमिरे, कृष्ण धरावासी र नेत्र एटमका शुभेच्छा मन्तव्य गीतकारका लागि मार्गदर्शक मननीय लाग्छन् । साङ्गोपाङ्गोमा झिनामसिना विषयमा नअल्मलिई विम्बविधानमा सजगता अपनाई अघि बढे गीतकार गिरीको गीति गन्तव्य समुज्ज्वल देखिन्छ ।
कृति ः सम्झनाका तरेलीहरू (गीतिसङ्ग्रह)
गीतकार ः विमल गिरी
प्रकाशक ः अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज,
प्रकाशन ः २०६७
मूल्य ः रु. ८९/-